I-Saudia, i-Emirates, i-Etihad yeenqwelomoya eziya eJamaica- Ngaba luHlaziyo lwezoKhenketho?
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamaica zokuPhula » I-Saudia, i-Emirates, i-Etihad yeenqwelomoya eziya eJamaica- Ngaba luHlaziyo lwezoKhenketho?
Airlines • isikhululo • Iindaba zeManyano • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • IKenya Breaking News • iindaba • Ukwakha kwakhona • Iindaba zaseSaudi Arabia zokuPhula • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
U-Edmund Bartlett Jamaica, u-Ahmed Al Khateeb, Saudi Arabia
Inguquko kwezokhenketho isenziwa kunye neenqwelomoya ezintsha ezinokubakho eJamaica. Iindiza ezisuka eDubai zisiya eMontego Bay okanye eKingston e-Emirates, ukusuka e-Abu Dhabi e-Etihad, okanye iinqwelomoya ezisuka eJeddah okanye eRiad ziye eJamaica eSaudia?
Iinqwelomoya ezinje ziyilelwe ukunxibelelana ukusuka eJamaica ukuya eBahamas, eSt Lucia, eSt. Martin, kwiRiphabhlikhi yaseDominican, eTrinidad naseTobago nakwezinye iindawo ezishushu zeholide zaseCaribbean? UMphathiswa uBartlett waseJamaica no-Ahmed Al Khateeb wase-Saudi Arabia bapheka into enkulu.
IJamaica inokuba yindawo yokuhamba ngenqwelomoya kwiCaribbean edibanisa kwiimarike ezintsha ezibandakanya i-United Arab Emirates, okanye i-Saudi Arabia.
Ubukumkani baseSaudi Arabia sele bube yindawo eshushu yokhenketho kwihlabathi liphela. Ngoncedo oluncinci, iJamaica isenokuba isendleleni yokuba liziko loKhenketho lweCaribbean.
ISaudi Arabia inemali kunye nonxibelelwano. IJamaica ibonwa njengesixhobo sokuseta ukhenketho kwihlabathi liphela. Ubambiswano olutsha lokuphumelela luyenziwa, kwaye mhlawumbi lukhawuleza.
Utshintsho kwisitayile sikaBob Marley usenokuba wenze umlingo. Ixesha elitsha lamathuba okhenketho aqala nje eJamaica, xa uMphathiswa wezoKhenketho kubukumkani base-Saudi Arabia U-Ahmed Al Khateeb wabonwa kunye nomninimzi wakhe, uMphathiswa wezoKhenketho eJamaica, u-Edmund Bartlett. Bobabini abaphathiswa babenxibe umnqwazi webaseball obonisa “Uvukelo.”
Utshintsho kuhambo noKhenketho, isitayile sikaBob Marley? UMphathiswa wezoKhenketho eSaudi naseJamaica banombono.
ISaudi Arabia iyeyona ndawo ishushu kukhenketho lwehlabathi. I-UNWTO yavula ikomkhulu lendawo eSaudi Arabia WTTC kwaye i Umanyano lweHlabathi kunye neZiko loLawulo lweNtlekele inokulandela.
Yaziwa ngokuhlala ucinga ngaphandle kwebhokisi kwaye unengqondo yehlabathi jikelele UMphathiswa Wezokhenketho eJamaica, Hon. U-Edmund Bartlett wabonwa encumile xa edibana noMnumzana Ahmed Al Khateeb onguMphathiswa Wezokhenketho kubukumkani base-Saudi Arabia. Umphathiswa wase-Saudi Arabia wayeseJamaica kwintlanganiso yokugqibela yengingqi yama-66 ye-World Organisation Organisation.
Eli yayilithuba lokuxoxa ngokubakho konxibelelwano lomoya phakathi kweCaribbean kunye nommandla weGulf. Unxibelelwano olunje lomoya luya kuba lithuba leJamaica kunye nezinye iiCaribbean zokuseka ithuba elingazange libonwe lokudibanisa uMbindi Mpuma, i-India, i-Afrika, i-Asiya kunye nokunxibelelana komoya ngqo neCaribbean. IJamaica inokuba yindawo yeenqwelomoya kunye neenqwelomoya ezondlayo ezisuka kwamanye amazwe eCaribbean ukunxibelelana.
Oku ngekhe kuvelise kuphela iimarike ezintsha zeCaribbean, kodwa kunyuse nokunxibelelana phakathi kwamazwe eziqithi.
U-Barlett wathi ngentlanganiso yakhe noMphathiswa wase-Saudi Arabia: “Sathetha ngokudibana komoya nendlela yokudibanisa uMbindi Mpuma, imakethi yaseAsia, kunye neendawo ezikuloo cala lehlabathi. Sathetha ngeenqwelo moya ezinkulu ezikwezo ndawo. Ingakumbi i-Etihad, Emirates kunye ne-Saudi Arabia Airlines. ”
Ngenxa yoko uBukumkani baseSaudi Arabia naseJamaica basayina isivumelwano seenjongo. Oku kwaxelwa ngu eTurboNews ngolwesihlanu.
Isiselo (akukho tywala)
“Isivumelwano uMphathiswa u-Al Khateeb aza kusizisa etafileni ngabo bangamaqabane aphambili eenqwelo-moya, ngelixa ndiza kuba noxanduva lokudibana namazwe asebenzisana nathi kwisakhelo sezokhenketho kwiindawo ezininzi, ukwenza ihabhu. Ukuba nehabhu enjalo eJamaica izithuthi zinokuhamba zisuka eMbindi Mpuma kwaye zingene kule ndawo yethu kwaye zisasazwe zisuka kwelinye ilizwe ziye kwelinye, utshilo.
UBartlett ucinga ukuba le ndlela yokuya kwiindawo ezininzi ibalulekile kuphuhliso lokhenketho kulo mmandla kwaye uya kuyandisa imarike ukuze yenze ubunzima obufunekayo ukutsala iindiza ezinkulu kunye nabaqhubi bezokhenketho ukuba babe nomdla eJamaica nakwingingqi.
Ayisiyiyo kuphela malunga nokunxibelelana komoya ukusuka kumasango e-UAE, okanye eSaudi Arabia ukuya eJamaica. Yindlela yokuhamba ngenqwelomoya evela eIndiya, eAfrika, kuMbindi nakuMzantsi Mpuma Asia ngeGulf gateway eya kwiCaribbean ngaphandle kokukhathazeka ngemigaqo-nkqubo engqongqo yevisa yase-US.
IJamaica inokuba lukhenketho kunye nehabhu leshishini lehlabathi kummandla weCaribbean.
“Kithina, oku kukutshintsha umdlalo ngenxa yokuba amazwe amancinci afana neJamaica akasokuze abenamandla okuba neenqwelomoya ezinkulu ezifana ne-Emirates Airlines okanye iSaudia eziza kuthi ngenqwelomoya. Nangona kunjalo, sinokuxhamla kwezi nkampani zeenqwelo moya ziza kwindawo yaseCaribbean, zehle apha eJamaica kodwa zisasazwe kwamanye amazwe akummandla, ”ucacisile.
Iqela le-wining kunye nomdaniso wokugqibela
IAl Khateeb, yayiqinile ekomelezeni unxibelelwano phakathi koMbindi Mpuma kunye neCaribbean.
Umphathiswa wase-Saudi Arabia uthe eJamaica: “Sixoxe noogxa bam ngezihloko ezibaluleke kakhulu kwaye siyakuxhasa ukudala iibhulorho phakathi kwe-Middle East kunye neCaribbean. Ndiyabulela uMphathiswa uBartlett ngeli thuba kwaye ndijonge phambili ekwandiseni iqumrhu ngokwandisa uMbindi Mpuma kunye neCaribbean, ”utshilo.
Bobabini abaphathiswa baxoxe nangeminye imimandla yokusebenzisana okunokwenzeka, kubandakanya nophuhliso lwabasebenzi, ukhenketho loluntu kunye nokomeleza ukwakha kulo mmandla.
UBartlett ucacisile: “Enye yeendawo ezingundoqo esithe saxoxa ngazo kukuphuhlisa ukomelela nolawulo lweengxaki, kunye nozinzo njengeentsika ezibalulekileyo ekufuneka kubuyiselwe kuzo ukhenketho. Kodwa ngakumbi, ukubaluleka kokwakha amandla ngaphakathi kwamazwe anokhenketho njengomqhubi woqoqosho lwawo-amazwe angenazibonelelo zibuthathaka kwaye asesichengeni sokuphazamiseka. Siza kubona intsebenziswano ekwakhiweni kweziko lokomelela apha eJamaica nakwiziko lokomelela eliseSaudi Arabia, utshilo uBartlett.
Okwangoku akukho luhlu lwamaxesha kwezi zimvo, kodwa ngokuqinisekileyo ukhenketho luya phambili eJamaica nangaphaya- kwaye akunakuba kuphela kubakhenkethi baseMntla Melika nase-UK kuphela.
Jonga i-albhamu ekhethekileyo yefoto ucofe ukhuphelo Landa i PDF
IGuam ngaphandle kwabakhenkethi baseKorea ngoku yimbali
Ukutyelela iNdlu kaMongameli eKabul kunye neTaliban ...
I-Toki Air ijoyina i-Sabre: I-Tokyo entsha yoqobo